အခြားထုတ်လုပ်သူများ တရုတ်အခြားစက်ရုံ & ပေးသွင်း
Key shell ကို
Flv Remote ကားသော့ခေါက် Chevrolet Cruze Epica Lova Camaro Impala Fit Astra J Corsa E Insignia Zafira C2345BT
Chevrolet Cruze Epica Lova Camaro Impala Fit Astra J Corsa E အတွက် Insignia Zafira C အတွက် Flip Remote Car Keyboard Shell2345BT အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Buttons:3Button Key Blank: ဟုတ်ကဲ့ Transponder Chip: No Electronics / Battery: No Weight: 41g ထူးခြားချက်များ - ၁ ။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောသော့အိတ်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးရန်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ 4. ယူပါ
Chevrolet Epica Aveo Spark LOVA Sail Lechi အတွက် Remote Key Shell Case Buttons အစားထိုးမထား Blade Blank Case
Chevrolet Epica Aveo Spark LOVA Sail Lechi အတွက် Remote Key Shell Case ခလုတ်ကိုပြန်လည်အစားထိုး Blanz Blank Case အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: ရုပ်ပုံပြသသည့်အတိုင်း Button:2Buttons Key Blank: ရှိသည့်ဘက်ထရီ: No Electronic: No Case အရွယ်အစား: 4.1cmx3 .2cm (LxW) Blade အရွယ်အစား - ၄၅ စင်တီမီတာအလေးချိန် - ၁၈ ဂဂထူးခြားချက်များ - ကျိုးသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့တစ်ချပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးခြင်း။ 2.Key ကိစ္စသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဤသည် aftermarket အစားထိုးအမှုဖြစ်ပါတယ် 3. ပြည်တွင်းရေးအီလက်ထရွန်းနစ်ယူပါ။
Chevrolet Cruze Buick Transponder အတွက် Opel Corsa Astra Meriva Zafira အတွက် Shell HU46 YM28 HU100 HU43 Blade အတွက်
Chevrolet Cruze Buick Transponder အတွက် Opel Corsa Astra Meriva Zafira အတွက် Shell HU46 YM28 HU100 HU43 Blade အခြေအနေ - ၁၀၀% အရောင်အသစ် - ရုပ်ပုံပြသသည့်အတိုင်းခလုတ်များ - ခလုတ် - သော့ခတ်သော့ဓါး: HU46 / HU43 / YM28 / HU100 Blade Transponder Chip : အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိပါ - အလေးချိန်မရှိပါ - ၁၇ ဂရမ်အရွယ်အစား - ၈ စင်တီမီတာ * ၃.၈ စင်တီမီတာ * ၀.၈ စင်တီမီတာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ - ခလုတ်များကျိုးခြင်းသို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသည့်သော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ အဓိကကိစ္စသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဤသည် aftermarket အစားထိုးအမှုဖြစ်ပါတယ်။ အထဲဝင်ပါ
2/3/4/5 Buttons Modified Flip Remote ကားသော့ခလောက် Chevrolet Cruze Epica Lova Camaro Impala ပုံစံပုံစံ
2/3/4/5 ခလုတ်များ Modified Flip Remote Car Key Case အတွက် Chevrolet Cruze Epica Lova Camaro Impala ပုံစံအဆင့်မြှင့်တင်မှုအခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: 5/3/4 Button Key Blank: Yes Transponder Chip: No Electronics / ဘက်ထရီ - ထူးခြားချက်မရှိပါ - ၁။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောသော့အိတ်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ အတွင်းပိုင်းလျှပ်စစ်ကိုယူပါ။